အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိရုံနဲ့နိုင်ငံတစ်ကာကို ဖုန်းအလကား အမြဲတမ်းပြောနိုင်တဲ့ - APK ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိရုံနဲ့နိုင်ငံတစ်ကာကို ဖုန်းအလကား အမြဲတမ်းပြောနိုင်တဲ့ - APK
Tuesday, April 26, 2016 AK MOBILE NETWORK No comments
Android /Tablet ကိုင်ဆောင်ကာ WhatsCall APK အသုံးပြုလိုသူများအတွက် နောက်ဆုံး Update တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ WhatsCall လေးကတော့ ဖုန်းအချင်းချင်း အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိရုံနဲ့ Free Calls ခေါ်လို့ရတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ လေးပါ နိုင်ငံမရွေး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ မိမိ ရဲ့ဖုန်းကို Wifi ကွန်နက်ရှင် နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် (2G/3G) ကွန်ရက် (EVDO,EDGE) စနစ်တစ်ခုခုနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားရပါမယ်။ ဒီ WhatsCall ဆော့ဖ်ဝဲ ကို မည်သည့် ဘလော့ကာ မှ တင်တာမတွေ့သေးတဲ့အတွက် စမ်းအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်... မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေအကြိုက်တွေ့စေမှာပါ..။ ဒီ ဆော့ဖ်ဝဲ ထူးခြားချက်ကတော့ မိမိဖက်မှာ အင်တာနက်လိုင်း လိုပါတယ်... အခြားဖက်မှာတော့ အင်တာနက်လိုင်းလဲ လုံးဝမလိုပါဘူး ပြီးတော့ WhatsCall ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ လည်းရှိနေဖို့မလိုပါဘူး။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 15.9 MB ရှိပြီး Android Version 2.3 နှင့်အထက်ရှိတဲ့ ဖုန်းများမှာထည့်သွင်း install လုပ်၍အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Sick of phone bills? Say goodbye to them by using WhatsCall now. Call home and abroad with no extra charges. There are more than 200,000 people using it! Every user can get 2,000+ free call credits each day, that’s 30+ mins free time of calling home!!!
In conjunction with the world's leading companies, powered by advanced voice coding and decoding technology, WhatsCall takes pride in the innovation and optimization of IP-PSTN call quality, allowing our users to make high quality phone and video calls at low rates.
Posted in: Andriod Application
Internet Broser တွေထဲမှာ အားလုံးထက် %100% လောက်မြန...
Xiaomi Flashing Tool v20160401 (New Version)
Click နှစ်ချက်နဲ့ အမြဲတမ်းသုံးလို့ရမဲ့ နောက်ဆုံးထွ...
အမေရိကန်နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး Apple ရဲ့ ဒုတိယသ...
♪ iPhone အားနည်းချက်နှင့်ပတ်သက်၍ Apple ကို FBI သတ...
G.I. Joe Rise of Cobra (2009) ရုပ်သံ/အကြည်
Spirits War (2014) ရုပ်သံ/အကြည်
ဝင်ဒိုးအသစ်တင်ပြီးတိုင်း မဖြစ်မနေ အင်စတောလုပ်ရတဲ့ေ...
Zemana AntiMalware 2.20.2.572​​​ Final​ Full Versi...
Malwarebytes Anti-Malware Corporate 1.80.1.1011 Fu...
Eset Nod32 Antivirus 9.0.377.0 Final Full Serial
Avira Antivirus 2016 Final Full Version
Soda PDF Standard 8.0.51.26506 Full Serial Key
EagleGet 2.0.4.10 Stable Version
Nero 2016 Platinum 17.0.04500 Full Version
TELECom Android Anti-Malware 4.0.1
Samsung Galaxy J စီးရီးရဲ့ အားသာချက်များ